Talooyinka Shiinaha ee loogu talagalay naqshadeynta qaybaha balaastigga ah ee saxda ah iyo wax soo saarka | Meesha
Sax qaybo caag ah design iyo wax taaj oo kale duray waa inuu ka bilaabaa qalabka, qaabeynta qaab dhismeedka qaybaha, naqshadeynta caaryada iyo farsamaynta, mashiinka wax lagu duro ee duritaanka, qalliin xirfadeed iyo jawi wax soo saar wanaagsan.
Iyada oo la horumarinayo warshadaha casriga ah, waxaa jira waxyaabo caag ah oo aad u fiican. Isla mar ahaantaana, badeecooyinka balaastigga ah ayaa sidoo kale si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan. Gaar ahaan, qaybo balaastik ah oo sax ah ayaa la isticmaalaa. Hadda aan idinla wadaagno tilmaamaha naqshadeynta iyo balaastiga qeybaha saxda ah.
Kala soocida saxda
qaybo caag ah:
A. Qaybaha saxsanaanta cabbirka sare, sida: qalabka geerka, geerka dixiriga, boolal, biraha. Qaybahan saxda ah waxaa badanaa loo isticmaalaa habka gudbinta saxda ah ee mashiinnada (sida madbacadaha, kaamirooyinka, nadiifiyaha faakiyuumka otomaatiga ah, aalado, aalado casri ah, UAVyada yaryar, iwm). Waxay u baahan tahay isuduwid sax ah, dhaqaaq siman, adkeysi iyo buuq la'aan.
Badanaa, darbiga qaybaha balaastiggu wuxuu ka yar yahay 1.00mm, oo ka tirsan qaybo khafiif ah. Qaybaha khafiifka ah ee darbiga leh waxay ka dhigi karaan cabirka badeecada mid aad u yar. Laakiin qaybo adag oo khafiif ah oo caag ah ayaa si dhib leh loo buuxin karaa sababtoo ah qaboojinta iyo adkeynta degdegga ah. Qaybaha khafiifka ah ee derbiga adagna uma adkeysan karaan xoogga dhimashada waxayna ku jabi karaan godka dhinta. Sidaa darteed, naqshadeynta qaybaha khafiifka ah ee khafiifka ah waa inay doortaan alaab leh astaamo farsamo wanaagsan. Naqshad macquul ah, sida dhumucda derbiga oo isku mid ah, qaybo ma noqon karaan gidaar aad u badan. Dhimasho qoto dheer, xagal ballaaran. Qaar ka mid ah qaybaha aadka u khafiifka ah, mashiinka wax lagu duubo ee xawaaraha sare ayaa loo baahan yahay.
Qaybaha indhaha waxay u baahan yihiin waxqabadka gudbinta / iftiinka iftiinka wanaagsan, iyo sidoo kale xasilooni cabbir wanaagsan iyo xirnaasho iska caabin ah. Tusaale ahaan, qalooca dusha sare ee muraayadaha indhaha iyo kuwa loo isticmaalo ee loo adeegsado mashruuc-sameeyaashu waxay u baahan yihiin saxnaan iyo xasillooni sare. Balaastik sare oo hufan sida PMMA ayaa loo baahan yahay. Isla mar ahaantaana, qaar ka mid ah qaybaha iftiiminta iftiiminta ayaa sidoo kale u baahan in la sameeyo xariiqyo wanaagsan oo dusha sare ah si loo aqbalo iftiinka ama xitaa iftiinka ama looga takhaluso dhalaalka.
D. Dusha sare ee dhalaalaya:
Qaybaha dhalaalka badan waxaa ka mid ah qaybo indhaha ah, iyo sidoo kale qaybo kale oo u baahan dhammaystirka dusha sare (muraayadda dusha sare). Noocyada noocan ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada elektaroonigga ah, sida qolofta taleefanka gacanta. Naqshadeynta noocyada noocan ah waa inay tixgeliyaan walxaha caagga ah oo leh dheecaan wanaagsan, naqshad dhumuc leh iyo tikniyoolajiyad dhiman.
Waxyaabo badan oo elektaroonig ah iyo koronto ayaa u baahan biyo-caddeyn, sida muraayadaha / saacadaha / qalabka elektaroonigga ee aan biyaha lahayn, alaabada dibadda iyo aaladaha leh biyo qoyan. Hababka ugu muhiimsan ee ka hortagga biyuhu waa shaambado qarsoodi ah oo ku duugan dusha sare ee badeecada, sida furayaasha ku lifaaqan, jajabyada ku lifaaqan, jeexdinnada daloolka, alxanka ultrasonic, iwm.
Nidaamkani waa in lagu meeleeyo filimka PET godka caarada la durayo isla markaana lagu daro qaybaha cirbadeynta tiknoolajiyada wax soo saarka oo dhan, taas oo si adag ugu dhajin doonta qaybaha caagga ah. Waxyaabaha IMD / IML waxay ka kooban yihiin: caddeyn sare, sheybaar, marna ha libdhin; daahfurnaanta muraayadaha muraayadaha oo sarreeya illaa 92%; dusha-u-adkaysiga iyo xoqida u adkaysta dusha sare ee adeegga muddada dheer; buoyancy ee waxyaabaha muhiimka ah inta lagu jiro wax taaj oo kale duray, nolosha muhiimka ah waxay gaari kartaa in ka badan 1 milyan oo jeer.
Qayb caag ah oo caag ah
IMD / IML guddi balaastig ah
Qaybo caag ah oo sax ah
Qaybta indhaha / daboolka daahfuran
Double duray kiiska biyuhu
Xaqiiqda saxda ah ee alaabada elektarooniga ah
Guryo adag oo qaabdhismeed adag
A. dhumucdiisuna waxay le'eg tahay darbiga Marka la isku duro, caaggu wuxuu ku jiraa xaalad dareere ah waqti aad u gaaban, iyo isku ekaanshaha dhumucda darbiga qaybaha ayaa saameyn weyn ku leh xawaaraha socodka iyo jihada balaastigga. Dhumucda qaybaha ayaa si weyn isu beddeleysa, taas oo keeni doonta cilado taxane ah oo tayo leh sida buuxinta qanacsanaanta, cilladaha, hoos u dhaca, calaamadaha walxaha, calaamadaha culeyska iyo khafiifka ah, iwm. Sidaa darteed, dhumucda derbiga ee qaybaha balaastigga ah ee saxda ah waa inay noqdaan kuwo isku mid ah suurto gal ah in design. Isbedelka dhumucda waa inuusan noqon mid aad u ballaaran, oo foorar ama kala-wareejin qaansada waa in lagu sameeyaa isbeddelka.
B. fiiro gaar ah u lahaanshaha isku xidhka qaybaha una samee shuruudo ku habboon saxnaanta cabbirka. Si loo hubiyo is-weydaarsiga qaybaha, inta badan waxaan siinnaa shuruudo adag oo ku saabsan saxsanaanta qaybaha shaqsiyeed. Laakiin qaybaha caagga ah, waxay leedahay dabacsanaan iyo dabacsanaan cayiman. Mararka qaarkood, illaa iyo inta naqshad dhismeedka ay macquul tahay, weecinta waxaa lagu sixi karaa isdhexgalka qaybaha, sidaas darteed heerka saxda ah ayaa loo dejin karaa si habboon si loo yareeyo dhibaatada soo saaridda. Degree
C. Xulashada maaddada Waxaa jira noocyo badan oo ah qalabka caagga ah, waxqabadkooduna aad buu u kala duwan yahay. Qaybaha balaastigga ah ee saxda ah, qalabka leh yaraynta / yaraanshaha / xasilloonida cabbir wanaagsan / iska caabin cimilo wanaagsan ayaa lagu xushay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalka. (a) ABS / PC oo leh hoos udhac hoose ayaa loo isticmaalaa in lagu bedelo PP hoos udhaca sare, iyo PVC / HDPE / LDPE oo leh hoos udhac hoose. ABS + GF waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo ABS.PC + GF PC. (b) Dooro PA66 + GF ama PA6 + GF halkii aad ka dooran lahayd POM ama PA66 iyo PA6.
E. Waxay leedahay meel lagu hagaajiyo. Naqshadaynta qaybaha balaastigga ah ee saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo leexashada suurtagalka ah ee soo-saarka mustaqbalka.
Qiimaha wax soo saarka nooca A.CNC guud ahaan wuu ka sarreeyaa daabacaadda 3D. Qaybaha waawayn, qiimaha waxsoosaarka CNC waa yar yahay.
Qalabka iyo qalabka farsamada ama daaweynta dusha sare iyo shuruudaha isku imaatinka, farsamaynta CNC ayaa lagula talinayaa, si xoog farsamo wanaagsan loo helo. Cabbir yar iyo xoog xoog yar, daabacaad 3-D ah ayaa loo isticmaalaa. Daabacaadda 3-D waa dhakhso, waana ka raqiisan tahay qaybaha cabbirka yar yar.
B. Noocyada guud ayaa xaqiijin kara isku dheelitirka isku dhafka qaybaha, hubin kara khaladaadka naqshadeynta iyo maqnaanshaha, iyo fududeynta hagaajinta naqshadeynta. Si kastaba ha noqotee, noocyadu guud ahaan kama tarjumi karaan shuruudaha farsamada ee sameynta caaryada, sida wax-u-qabashada xagal qaboojiyaha / hoos u dhigista / qaab-dhismeedka / isku-darka iyo wixii la mid ah
(1) Naqshadeynta caaryada caagga ah (naqshadeynta caaryada) Qaabab tayo sare leh ayaa fure u ah sameynta qaybo sax ah. Qodobbada soo socda ayaa u baahan in la raaco.
E. qalabka baaritaanka lagama maarmaanka ah. Intaa waxa u dheer, ka-baaraandegidda caaryadu waa inay raacdaa nidaam adag oo ay ku tiirsanaadaan shaqaale tayo sare leh si ay u shaqeeyaan.
Hore: Caaryada orodyahanka kulul
Xiga: Balaastiig xad dhaaf ah